शब्दकोश: संकल्पको संयोजन
मानवीय स्वभाव नै उस्तो, समयको कुनै बहाना मिल्यो कि त त्यसैलाई साइत बनाएर यो गर्छु र त्यो गर्दिनँ भनेर संकल्पको बिटो थुपार्न ध्याउन्न हुन्छ । हिन्दी म्यागेजिन आउटलुकको नयाँ वर्ष २०१० विशेषांकमा पढ्न पाइएको थियो - नयाँ वर्षमा गरिने संकल्पहरुको कसरी सत्यानास हुन्छ कुन र कस्ता खालका संकल्प सत्यानास हुन्छन् ?
संकल्पको सत्यानास हुनुमा मानिसको लोसे र बेहोसी आनीबानीलाई कारक मानिएको ती १० सूचीहरु मानवीय व्यावहारिक जीवनमा आधारित थिए । पढेर निकैबेर घोरिन बाध्य गरायो । धन्न त्यतिखेर मेरो घोरिने समय संकल्पले खोसेको थिएन । त्यसो त संकल्पको मात्र कहाँ हो र सत्यानास त यहाँ धेरै कुराको भएको छ । भएका/रहेका ठोस कुराको त सत्यानास हुन्छ भने मनमगजमा बुनिँदै गरेको संकल्पको कलिलो जालोको के कुरा ! त्यो जालो आज बन्छ भोलि च्यातिन्छ ।
मनको पर्दाबाट अलिकता फुत्किएर देशको राजनीतिक मानचित्रमा फैलिने हो भने संकल्पको हरिबिजोक आलै पढ्न सकिन्छ । दिमागी बुइँगलमा तुनिएको सोचको रेखा त लौ चुँडिन सक्ला रे त्यो अर्कै कुरा भो, ढ्याप्पै मितिरेखा अंकित भएको संविधानसभाको अलपत्रे अवस्था देख्दा संकल्पको बिजोक त तैतै अथवा भन्न मन लाग्छ ।
गर्न नहुने/नमिल्ने कुरा गर्न यहाँ कुनै योजना र लम्बेतान सूचीरेखा चाहिन्न । झटपट जासुसी तवरमा त्यस्ता कुरा कहिले-कहिले पार लागिसकेको हुन्छ । तर सिलसिला मिलाएर अनेक झमेलाबाट तयार पारेको योजनाको पोको भने वरको परसम्म सर्दैन । संविधान निर्माण शान्ति प्रकृया र लोकतान्त्रिक परिपाटी संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व अहिले यही अवस्थामा घिटघिटोमा छटपटाइरहेछ नेपाली समयचक्रमा । आ-आफ्नै माग र जिद्दीमा मारमुङ्ग्री र माथापच्चीसी गर्नु नै सरोकारवालाहरुले आपुनो धर्म सम्झे जस्तो देखिन्छ ।
यसरी परिस्थितिहरुलाई काँक्रासरि चिरा पारेर हेर्दा "संकल्प गरिन्छ - सत्यानास पार्नकै लागि" भनेझैँ हुन्छ प्रायसः परिस्थितिमा । यो प्रकृया त "प्राणी मर्नकै लागि जन्मिन्छ" भने जस्तो हदै निराशावादी लाग्छ । समय मुठीमा कसिएको तोरीको दाना हो जति कसियो खुस्किँदै जाने । यसैले अब सत्यानास भएर जाने संकल्पहरुलाई जोगाएर संयोजन गर्नुपर्ने चुनौती छ । नङ पाल्नु छ, विनाशक घोचाइका लागि होइन, सौन्दर्यमा निखार थप्न भने ठेसहरुबाट यसलाई जोगाउनु छ । नत्र गन्ती नै गर्ने हो भने त संकल्पका भुल्काहरु मनको तलाउमा पलाइरहन्छन्, नङहरु बढिरहन्छन्, के अर्थ यी आउने र जाने भुल्का र टुसाहरुको ?
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, February 24, 2010
Aakar February 24, 2010
भन्ने नै गरिएको छ, 'वाचा तोड्नै को लागि त गरिन्छ' ! तपाईले माथि पनि भनिसक्नुभएको छ, "संकल्प गरिन्छ - सत्यानास पार्नकै लागि" !
यी कुराहरु पनि यस्तै रहेछन्, तर सरकारी र निजी संकल्प मा भने थोर बहुत फरक हुन्छ है ! अनि हाम्रो निजी संकल्प पनि हाम्रो 'मुड' मा भर पर्छ !
Dilip Acharya February 24, 2010
माथी आकारजीले लेखिसक्नु भएको छ: "वाचा तोड्नैको लगि गरिन्छ"... यसलाई अझ प्रष्ट पार्ने हो भने वाचा गर्नु नै वाचा तोड्ने सुतरुवात हो भन्दा परक नपर्ला--कमसेकम हाम्रा नेताहरुमा भने ठ्याक्कै मिल्छ । :f:
ब्लगर भेलाको अढाई घण्टा
Flash back : Mr Lonely, I love you !
हामी के लेखिरहेछौँ ?